လူချင်းနီးပေမဲ့ စိတ်ချင်းဝေးနေတဲ့အဖြစ်မျိုး ကြုံနေရပြီလား? – Trend.com.mm
လူချင်းနီးပေမဲ့ စိတ်ချင်းဝေးနေတဲ့အဖြစ်မျိုး ကြုံနေရပြီလား?
Posted on April 25, 2019 June 14, 2019 by Noel
အချစ်ရေးတစ်ခုဟာ အမြဲတမ်းပျော်ရွှင်နေရတယ်ရယ်တော့မရှိပါဘူး။စိတ်ညစ်စရာတွေ၊စိတ်ရှုပ်စရာတွေလည်းကြုံရသလို အချစ်တွေပိုတိုးလာတဲ့
အခိုက်အတန့်တွေလည်းရှိကြပါတယ်။တစ်ခါတစ်လေဆို ချစ်သူတွေလို့သာ ခံယူထားတယ်။တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်စိတ်ချင်းဝေးကွာနေတာတွေလည်း
အခုပြောပြပေးချင်တာက ဘာလဲဆိုရင် ကိုယ့်ချစ်သူက ကိုယ့်အနားကနေထွက်သွားချင်နေသလိုလို၊ကိုယ့်ကိုထားခဲ့တော့မလို၊လူကသာကိုယ့်အနားမှာရှိနေတယ်။စိတ်ချင်းဝေးကွာနေသလို ခံစားလာရတဲ့အခါ ဘာဆက်လုပ်သင့်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းပါပဲ။မိန်းကလေးတွေက တစ်ခုခုဆို သွေးပူပြီး ၀ုန်းဒိုင်းကြဲဖြေရှင်းတာများလို့ ပိုပြီးအဆင်မပြေဖြစ်တာတွေအများကြီးပါ။ဒါကြောင့်သွေးအေးအေးနဲ့ ဒီအခြေအနေကိုဖြေရှင်းနိုင်အောင် အချက်ကလေးသုံးချက်ကိုမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
သူ ကိုယ့်အနားကနေထွက်သွားချင်နေတယ်လို့စိတ်ထဲကခံစားလာရရင် မလန့်သွားပါနဲ့။ယောကျာ်းလေးတွေက တစ်ကြိမ်တစ်ခါလောက်တော့သူတို့လက်ရှိအချစ်ရေးကနေရုန်းထွက်ချင်တဲ့စိတ်လေးရှိတတ်ကြပါတယ်။သူတို့စိတ်ထဲ မလွတ်လပ်ဘူး၊ကျဥ်းကျပ်တယ်လို့ခံစားလာရတဲ့အခါမျိုး၊မပျော်ရွှင်တော့ဘူးလို့ခံစားလာရတဲ့အခါမျိုးမှာပေါ့။ဒါပေမဲ့ ဒါကလည်း အခိုက်အတန့်ပါပဲ။
*သူကိုယ့်ဆီ တကယ်ပြန်လာချင်ရဲ့လားဆိုတာ သေချာအောင်စောင့်ပါ
ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာ သင့်အနေနဲ့ သူ့ကိုအချိန်ခဏတာတော့ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။သူ့စိတ် သင့်ဆီပြန်လည်လာဖို့ သူ့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်စိတ်နဲ့သာဆုံးဖြတ်ပါစေ။
*သင့်ဆီသူပြန်ရောက်လာတဲ့အခါ အေးအေးဆေးဆေးတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ အချစ်ရေးကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းပါ
သူ့အနေနဲ့ သင့်ဆီက ထွက်သွားဖို့ကြိုးစားကောင်းကြိုးစားလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ သူဟာ သင့်ကိုတကယ်ချစ်ပြီးမပြတ်နိုင်လို့ သင့်ဆီပြန်လာတယ်။ခဏတာ
အေးစက်နေခဲ့ပေမဲ့ နောက်ပိုင်းပြန်ပြီးနွေးထွေးဖို့ကြိုးစားလာတယ်။သင့်ကိုပိုပြီးဂရုစိုက်ပေးလာတယ်ဆိုရင် လစ်လပ်သွားတဲ့အချိန်တွေအတွက် အပြစ်တင်
ဝေဖန်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။မသိသလိုပဲနေပြီး သူကိုယ့်ဆီမှာ ပိုပြီးပျော်ရွှင်အောင် သူဟာ ကိုယ်နဲ့မှ ပျော်ရွှင်ရတယ်ဆိုတာ သူခံစားရအောင်လုပ်ပါ။
အချစ်ရေးတစ်ခုဟာ စဖို့လွယ်ပေမဲ့ ဖြတ်ဖို့ကတော့ လွယ်မလိုနဲ့ခက်ပါတယ်။သူ့ဘက် ကိုယ့်ဘက်နားလည်အောင်ညှိယူရတဲ့အပိုင်းတွေကလည်းအများကြီးပါပဲ။
သူဟာ ကိုယ့်ဆီကထွက်သွားဖို့ကြိုးစားခဲ့ဖူးတယ်ဆိုရင် ကိုယ်ဘာလိုအပ်နေခဲ့တာလဲဆိုတာ သင့်ဘက်ကလည်း ပြန်ဆန်းစစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်။မိန်းကလေးတွေအတွက် အကြံပေးထားတာဆိုပေမဲ့ ယောကျာ်းလေးတွေလည်းကိုယ့်ချစ်သူမိန်းကလေးအေးစက်စက်ဖြစ်နေတဲ့အခါ ဒီအချက်လေးတွေအတိုင်းလုပ်ကြည့်ပါ။
Sung Hoon နဲ့ Han Bo Reum တို့ရဲ့ထွက်ရှိလာတော့မယ့် ဇာတ်ကားသစ်လေး